केन्द्रमा एशिया : नेपालले अपनाउनु पर्ने सावधानि | सिमान्तMarginal केन्द्रमा एशिया : नेपालले अपनाउनु पर्ने सावधानि – सिमान्तMarginal
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपको बिजयको संकेतको रुपमा मलाइ लागेको थियो कि – अब एशिया, खास गरि चाइना माथि कडा दवाव, प्रभाव सिर्जना गरिने छ । एशियामा परेको अन्तराष्ट्रिय राजनीतिको असरले नेपालजस्ता साना मुलुकलाई खपी नसक्नु हुनेछ । मध्यपूर्व, अरबतिर ‘आफ्नो अफ्ठ्यारोलाइ’ प्राय ध्वस्त पारेर आफु खुसि एक्लो युद्ध विजय गरेको अमेरिका अबको सामरिक र आर्थिक शक्तिका रुपमा उदियमान चिनलाइ पहिला, र भारतलाई दोश्रो
प्राथमिकताका आधारमा सिथिल पार्न चाहान्छ । त्यसैले सतहमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रपलाइ ‘सनकी’ भनेर बिरोध भए पनि उनको विजयमा सिंगो रीपव्लिकन पार्टि नै रहेकोले त्यस्तो बिरोधमा तुक देखिनुहुन्न । अर्थात डोनाल्ड ट्रपलाइ राष्ट्रपतिको उमेद्वारको रुपमा मनोनयन गरेर जिताउनेसम्म काम गरेको रीपव्लिकन पार्टिलाइ चोखो राखेर डोनाल्ड ट्रपलाइ मात्र सनकी भन्नु रणनिति नबुझ्नु हो । डोनाल्ड ट्रपले राष्ट्रपतिका रुपमा लिने भावी रणनिति नै रीपव्लिकन पार्टिको स्वार्थ हो; त्यसैले जनताले मन नपराएकै भए पनि त्यो स्वार्थ पुरा गर्न सक्ने व्यक्तिका रुपमा उक्त पार्टिले ट्रपलाइ राष्ट्रपति बनाएको मान्नु पर्छ । हुन पनि पछिल्लेा समय दक्षिण कोरियालाइ केन्द्रमा राखेर चिन, रुस र भारत माथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष दवाव सिर्जना गरेको प्रष्ट देखिएका छन् । अहिले सिरिया, अफगानिस्थान, लिविया वा इराक त्यस राजनीतिको केन्द्रमा छैन, छ त भने दक्षिण कोरिया र चीन !
अब समय यस्तो आएको छ कि दोषीले भन्दा निर्दोषले धेरै दुख पाउनु पर्ने छ । यसको उदहारण नेपाल हो । दोक्लममा चिन र भारतको समस्याले नेपाललाई पनि अस्थिर बनाएको छ । ती दुवै मुलुकले नेपालाई सामरिक महत्वले हेरेर चलखेल गरिरहेको अवस्था छापाहरुमा बर्गेल्ती देख्न पाइञ्छ । तिव्वतलाई नाम बनाएर चीनको शक्ति घटाउने रणनिति पहिले देखिकै हो । दलाइ लामा हुन वा हालै चर्चामा आएका नेपालका राम बहादुर (बारा), सबैको सहानुभूति तिव्वती शरणार्थीलाइ आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्नु मै रहने देखिन्छ। सिरियाले भोगेको युद्धमा टर्कीले पनि भोग्नु परेको बाह्य दवाब अनि शरणार्थी समस्या यसको उसहारण हो । त्यतिमात्र होइन पुरै युरोप शरणार्थी समस्याले ग्रसित छ, यहि इस्स्युले त्यहाँको राजनीतिलाई चलाएको छ; ब्रेक्जिट पनि यसैको उदहारण हो ।
यहि कारणहरुले गर्दा नेपालको आर्थिक एवं राजनितिक अस्थिरता केवल आन्तरिक मात्र नभएर धेरै त बाह्य नै हो, भनेर बुझ्नु पर्छ । त, के नेपालका सासकहरु यसो भनेर उम्कन मिल्छ ? किमार्थ मिल्दैन ! त्यसैगरी जनस्तरमा अस्थिरताका कारणहरुलाइ बुझ्दा केवल सरकारको मात्र दोष देख्न पनि मिल्दैन । बरु, बिदेशीहरुले कसरि यो अवस्था सिर्जना गरिरहेका छन् त्यसलाई उदाङ्गो पार्ने तिर सरकार र जनताको सह कार्य हुन जरुरि देखिन्छ। एड, ट्रेड र सेक्युरिटिको नाममा चेलेको अहिलेको विश्व शासनका पक्षपाति गैह्र सरकारी संस्थाहरुले जनतालाई सरकारको ‘बिरोध गर्न’ बलियो पार्ने र सरकारलाई कमजोर पारेर त्यस्तो खालि ठाउँमा आफ्नो भूमिका बडाउने गरेका धेरै उदहारण छन । यस कुरालाइ बुझ्न नोवेल पुरस्कारले सम्मानित जोसेफ स्टिग्लिट्जका पुस्तकलाई नजिरका रुपमा लिन सकिन्छ; खासगरि ‘ग्लोबलाइजेशन एंड इटस डिस्कण्टेण्टस’ त गरिव मुलुकका सासकहरुले पढनै पर्छ । जहाँ विश्व बैङ्क र अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको गतिविधि माथि पनि प्रकास पारिएको छ । यदि नेपाल ग्लोबलाइजेसनलाइ अंगालिरहेको छ भने त्यसका बिकृति र समस्याबाट पनि अछुत छैन, यो नै वास्तविकता हो ।
यसरि नेपाल नचाहेर पनि चेपिने अवस्थामा आइपुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय हित र बेहितमा प्रष्ट भै सबै पक्षका बिचमा सहकार्य हुनु पर्ने हो, तर दलिय राजनीतिमा त्यो कुरा निकै दुरदर्शी र नि:स्वार्थि राजनेताको अभावमा सम्भव देखिन्न । नेपालको केसमा त त्यो आकासको फल नै भएको छ । सरकार आफै हराएको छ; उद्धेश्य र सिद्धान्तहिन बन्न पुगेको छ । जनतामा घनघोर निराशा छाएको छ । जनताको सक्रियतालाई छल र कपटले भरिएका ज्ञानका समाचारहरुले सिञ्चित गरिएको छ। जनतालाई यो वास्तविकता बुझाउन वा उनीहरुले नबुझेसम्म सरकारले आफु पराजित र बाह्य शक्तिलाई विजयी बनाइरहने छ ।
Previous Postअनसनको सन सनNext Postनेपालमा भिषण बर्षादका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त, कयौंको मृत्यु, जनधनको क्षति